UleFone T2 Pro နှင့် Ulefone X: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှု Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | မိုဘိုင်း, UHI, Ulefone
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ် Ulefone သည် MWC 2018 တွင် guests ည့်သည်များစွာလာရောက်ခဲ့သည်။ ယနေ့နံနက်ကသူတို့ဖုန်းနှစ်လုံးကိုဘာစီလိုနာရှိလူကြိုက်များတဲ့တယ်လီဖုန်းအဖြစ်အပျက်မှာပြသခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်း ၂ လုံးကိုတင်ပြခဲ့သည်။ Ulefone T2 Pro နှင့် Ulefone X တို့ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယခင်က iPhone X. မှုတ်သွင်းခဲ့စဉ်က၎င်း၏ flagship အသစ်ဖြစ်လာမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့ကတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကစကားပြောတွေအများကြီးပေးမယ်လို့ကတိပေးတဲ့အမျိုးမျိုးသောစိတ်ဝင်စားစရာဖုန်းနှစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် Ulefone T2 Pro နှင့် Ulefone X တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ဤဖုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘာသိုလှောင်ထားသနည်း။
Ulefone သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူကြိုက်များသည့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် MWC 2018 ၌သင်၏တည်ရှိမှုသည်ပိုမိုထိတွေ့မှုရရှိရန်ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမှတ်တံဆိပ် အလယ်အလတ်အကွာအဝေးအတွင်းဖုန်းများနှစ်ခုတင်ဆက်ထားပါတယ်, သင်အငြိမ့်ရွှေ့သော။ ဖုန်းတစ်ခုချင်းစီကိုသင့်အားပိုမိုပြောပြပါမည်။
1 Ulefone T2 Pro ကို
Ulefone T2 Pro ကို
ဤဖုန်းသည်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းပါသည့်ပြီးပြည့်စုံသောကိရိယာတစ်ခုသည် ၄ ​​င်း၏ကတ်တလောက်ရှိကျန်ဖုန်းများထက်သာလွန်သည်။ ဒါကြောင့်မျှော်လင့်ချက်များစွာရှိနေတယ်။ ဤရွေ့ကား device ကိုသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်:
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Ulefone T2 Pro
ပုံစံ T2 Pro ကို
operating system အန်းဒရွိုက် 8.1 Oreo
ဖန်သားပြင် ၆.၇ လက်မ FHD + resolution နှင့်အတူ
Processor ကို Helio P70 Octa-core
GPU ကို ARM Mali-G72 MP4 800MHz
နောက်ကင်မရာ ကင်မရာနှစ်လုံး ၂၁ MP + 21 MP
ဆက်သွယ်မှု 4G 3G LTE WiFi 802.11a/b/ g / n / ac Bluetooth 4.1
အခြားအင်္ဂါရပ်များ Fingerprint Reader သည်မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမျက်နှာပြင်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်
ဘက်ထရီ 5.000 mAh ဘက်ထရီ
ရှုထောင့် 78.3mm x 165.9mm x 7.7mm
သင်မြင်သည့်အတိုင်း, ဤစက်သည်ယခုအချိန်အထိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သောအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သေချာပေါက်ရောင်းအားကောင်းပြီးဈေးကွက်မှာအတော်လေးအောင်မြင်တဲ့ဖုန်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဈေးကွက်အတွင်းပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်လာသည် Helio P70 နှင့်အလုပ်လုပ်သည် ပရိုဆက်ဆာအဖြစ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာအချက်အလက်အချို့ကိုသိထားတဲ့ပရိုဆက်ဆာ။ ဒီဟာက MediaTek ရဲ့အကောင်းဆုံးပရိုဆက်ဆာဖြစ်ပုံရတယ်။
ထိုကွောငျ့, ဤ Ulefone T2 Pro သည်စွမ်းအင်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူအားလုံးဖုန်းတစ်ခု၏တောင်းဆိုမှု။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ကြီးမားသောဘက်ထရီရှိပြီး၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များစွာပေးလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, စကားပြောဖို့အများကြီးပေးမယ့်ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုကတော့လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာကိုဖန်သားပြင်ထဲကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်အမှတ်တံဆိပ်ခဏကြိုးစားခဲ့သောအရာတစ်ခုခုသည်။ ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်ရတာစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ Ulefone T2 Pro တွင်မျက်နှာပိုင်းဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှုလည်းရှိသည်.
ဒုတိယနေရာတွင်မူဒီဇိုင်းသည် iPhone X ဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသောဤဖုန်းကိုတွေ့ရသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ဖုန်းနှင့်ဆင်တူသောမျက်နှာပြင်ကိုရွေးချယ်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စားသုံးသူများထံမှမှတ်ချက်များစွာထုတ်ပေးလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ဤရွေ့ကားကိရိယာ၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Ulefone X
ဖန်သားပြင် ၆.၁ လက်မ ၁၉.၅: ၉ အချိုးနှင့် HD + resolution
Processor ကို MediaTek မှ MT6763 Octa-core
နောက်ကင်မရာ ကင်မရာနှစ်လုံး ၂၁ MP + 16 MP
သင်မြင်သည့်အတိုင်း, ဒီကိရိယာဟာ iPhone X နဲ့ဆင်တူတဲ့ဖန်သားပြင်တစ်ခုကိုရွေးထားတယ်။ ဒါကြောင့်ပင်ထိပ်မှာထစ်ရှိပါတယ်ကတည်းက။ အချို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်၎င်းကိုတုပရန်ကြိုးစားပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်တွင်ကြိုက်နှစ်သက်ဟန်ရှိသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်ုပ်တို့မှာအရည်ပျော်ပစ္စည်းအလယ်အလတ်တန်းစား၊ နောက်ကင်မရာကောင်းပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။
ဤရွေ့ကားဤသည် Ulefone ဖုန်းနှစ်လုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မသိသောသော့ချက်အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်နှစ်ခုဟာစျေးကွက်ထဲသို့ရောက်ရှိနိုင်မယ့်စျေးနှုန်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကမှတ်ချက်မပေးသေးပါဘူး။ ဒီသီချင်းကိုဒီရက်သတ္တပတ်နှောင်းပိုင်းမှာထုတ်ဖော်ပြသမယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအမှတ်တံဆိပ်ကြေညာဖို့ရှိပါတယ်အရာကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Ulefone » Ulefone T2 Pro နှင့် Ulefone X: Ulefone ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်